बी अलर्ट ! चोर आउला है… – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ आश्विन १८ गते बिहीबार १७:१६ मा प्रकाशित
क्यालेन्डरले चाडपर्व नजिक्याउँदै छ । उसो त वर्षैभरि नेपाली क्यालेन्डरमा विभिन्न चाडहरु देखिइरहेकै हुन्छन् ।
नेपालीहरुले मनाइरहेकै हुन्छन् । तर आउँदै गरेको चाड, चाड मात्रै पनि होइन, महान चाड । महान यसअर्थमा कि ८० प्रतिशत बढी हिन्दूहरु नेपालमा छन् । र, हिन्दूहरुको मुख्य चाड दशैं तिहारलाई मानिदैं आइएको छ ।
क्यालेन्डरहरु चाडपर्वका लागि मार्क भैसकेका छन् । बजारमा देखिन थालेको चहलपहलले यसको पुष्टि गर्छ । पोखरेलीले पनि बजारलाई व्यस्त बनाइरहेका छन् । तर यो चहलपहल दशैं अर्थात् टिकाकै दिनसम्म भने रहँदैन । टिकाको २ देखि ४ दिनअघि नै बजार सेलाउँछ । पोखरा सुनसान हुन्छ, काठमाडौं जस्तै ।
गाउँ भरिभराउ र रमाइलो हुने बेला भनेकै दशैं हो । शहरमा अध्ययन, जागिर, व्यापार लगायतका शिलशिलामा आएका व्यक्तिहरु त गाउँ जाने नै भए । त्यसबाहेक, यहिँ घर भएकाहरुपनि मान्यजन अग्रजहरुको आर्शिवाद थाप्न गाउँ जाने गर्छन् । करिब ३,४ दिन शहर सुनसान बन्नुका कारण यीनै हुन् ।
यहि सुनसान समयको फाइदा उठाउँछन् चोरी गर्नेहरु । चोरी गर्नेहरुलाई चाडपर्वको समय भनेको पिक आवर जस्तै हो । तर, चोरहरुले दशैं नै पर्खेर बस्ने भने होइन । पोखरामा भएका चोरीका घटनाहरु हेर्दा जुनसुकै बेला जहाँ पनि चोरी भएको पाइएको छ । दशैं अर्थात् चाडपर्वका बेला शहर सुनसान हुने भएकोले केहि सहज भने चोर्नेहरुलाई होला भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
०७४ फागुन ५ गते चाउथेमा एकै रात ३ छुट्टाछुट्टै स्थानमा चोर पसे ।
चाउथे आर एण्ड वि मोवाईल मर्मत सेन्टर, ओम शान्ति र एक कस्मेटिक पसलमा चोर पसेको थियो । मोबाइल पसलबाट केही मोबाइल र कस्मेटीकबाट केही रकम चोरी भएपनि ओम शान्तिमा चोर पस्यो, चोरी भने नभएको पुष्टि भयो ।
०७४ फागुन ९ मा गैंडाकोमुखमा रहेको फेन्सी तथा कस्मेटीक पसल चोरियो । करिब ८० देखि ९० हजारको सामान चोरिएको सञ्चालकले बताएका थिए ।
चोरी र योजना
चोरी नं १
०७५ जेठ २४ गते पोखरा ६ स्थित शिवराम बरालको घर चोरी भयो । घरमा कोही नभएको मौका छोपेर बागलुङ बसपार्क बस्ने १९ वर्षीय विकेस केसी र सोही ठाउँका १८ वर्षीय जिरे भन्ने लक्ष्मण केसी चोरीका लागि त्यहाँ पुगेका थिए ।
उनीहरुले करिब ७ तोला सुनका गहना, ४ थान घडी , ३ थान ट्याव, ४ थान मोबाइल, ४५ हजार नगद लगायतका सामान चोरेर त्यहाँबाट फरार भएका थिए । फरार चोरहरुलाई ३ महिनापछि कास्की प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।
उनीहरुले चोरेको सामसुङको ट्याव पोखरा १८ बस्ने तारानाथ परियारले खरिद गरेको थाहा भएको थियो । यस्तै चोरिएका सुनका गहना डिकमा राखी लागु औषध, पैसा दिने गरेकी नालामुख बस्ने ३३ वर्षीय मञ्जु केसी पनि अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् ।
विकेसको टोलीले अन्य स्थानमा पनि चोरी गर्ने गरेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
चोरी नं २
अनुसन्धान पश्चात् अन्ततः चोरको पहिचान भयो र, पक्राउ पनि परे । पक्राउ पर्नेमा पोखरा ७ मासबार बस्ने २४ वर्षका प्रतीक पहारी र सोही ठाउँका २६ वर्षका गणेश परियार छन् ।
चोरी नं ३
०७५ भाद्र २० गते राती १२ः३० बजे पोखरा २७ रिट्ठेपानिमा ३ जनाको समूह चोरी गर्ने उद्धेश्यले एक घरमा जान्छन् ।
भ¥याङ, रड, पेचकस, चक्कु, टर्च लाइट, डोरी र धारिलो हतियार लगायत ढोका फोर्ने सामानका साथ उनीहरु मुल ढोका फोर्न कस्सिए । मुलढोका फोर्न असफल भएपछि भ¥र्याङको साहाराले पछाडिबाट माथिल्लो तल्लाको ढोका फोरेर घरभित्र पसे ।
घरभित्र छिरेपछि परिवारलाई धम्क्याउन सुरु हुन्छ । आफूहरु पहिलेदेखि नै अपराधी भएको र जेलनेल समेत भोगेको बताउँदै परिवारलाई डर देखाउदै नगद गरगहना जे छ सबै दिन धम्क्याउँछन् । परिवारले हारगुहार गर्छन् । लगत्तै छिमेकिहरु त्यस घरमा प्रवेश गरेपछि उनीहरुले चोरी गर्न ल्याएको सामान समेत त्यही छाडी कुलेलाम ठोक्छन् ।
घटना पश्चात् इलाका प्रहरी कार्यालय हंसपुरले खोजी कार्य तिव्र बनायो र उनीहरुलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नेमा पोखरा २७ रिट्ठेपानि बस्ने ५१ वर्षका प्रीतिमान गुरुङ, म्याग्दी जिल्ला साविक कुहु गाविस १ घर भई रिट्ठैपानि बस्ने ४५ वर्षका ज्ञानबहादुर अर्मजा र म्याग्दी साविक कुहु गाविस घर भई रिट्ठेपानि नै बस्ने ३१ वर्षका दिनेश बढुवाल रहेका छन् ।
पक्राउ परेका तीनै जना यसअघि पनि विभिन्न मुद्धामा कैद भुक्तान गरि छुटेको प्रहरीले जनायो ।
चोरी नं ४
भदौ ३१ गते राति सिर्जना चोक स्थित जनएकता सहकारीबा ९ लाख चोरी भयो । संस्थाबाट रकम चोरी गर्नेहरुलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
पक्राउ पर्नेमा पोखरा ६ गौरीघाट बस्ने वर्ष १८ का कमल ठगुन्ना रहेका छन् । उनको साथबाट प्रहरीले ५ लाख ३८ हजार ८० रुपैया समेत बरामद गरेको थियो ।
सहकारीको सटर फोडेर भित्र पसी टेवलको घर्राबाट उनीहरुले रकम चोरेका थिए । सहकारीले सामान्य सुरक्षा नअपनाएको हुनले पनि सजिलै चोरी भएको थियो ।
योजना गर्दै गर्दा पक्राउ
०७५ भदौ २१ मा १२ः३० बजे चिप्लेढुङ्गा, न्यूरोडमा प्रहरीले २ युवती र १ युवकको शंकास्पद गतिविधि देख्छन् । शंका लागेर सोधपुछ गर्न खोज्दा उनीहरु भाग्न कोशिस गरेपनि प्रहरी फन्दामा पर्छन् ।
पक्राउ पश्चात् सोधपुछ गर्दा उनीहरुले मुक्तिनाथ बैंक चोरी गर्ने योजना बनाएको र विभिन्न समयमा रेकी गर्ने गरेको बताएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा पोखरा १४ काजिपोखरी बस्ने २१ वर्षका सन्देश गुरुङ, म्याग्दी जलजला ६ बस्ने वर्ष २० कि सुनिता पुन मगर र पोखरा ९ नयाँबजार बस्ने १९ वर्षकी सुचित्रा थकाली हुन् ।
प्रहरी कार्ययोजना अनुसार अघि बढेको छ
विशेषगरी भदौपछि चाडपर्व सुरु भएका छन् । साउन र भदौमा मात्र १५ बढी घटना भए । यस्तो बेलामा सबै सतर्क हुनुपर्छ । प्रहरी पनि यो समयमा हाइ अलर्ट भएर खटिएका हुन्छन् ।
हामीले सामाजिक संघसंस्थासँग मिलेर कार्यक्रम पनि गरेका छौं । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दे कार्ययोजना पनि बनाएका छौं । सोही कार्ययोजना अन्तर्गत हामी सक्रिय छौं ।
चोरी आफैंमा गाह्रो विषय हो । चोरी घटनाबारे मुख्य सूचना समाज र स्थानीय व्यक्ति नै हुन् । शंकास्पद व्यक्तिहरु छन् भने प्रहरीलाई गोप्य रुपमा जानकारी गराइदिनु भो भने घटनामा अवश्य कमि आउँछ ।
कति बजे कस्तो समयमा चोरी हुन सक्छ ?
तर स्थानीयनै सजक भए भने ५० प्रतिशत भन्दा धेरै चोरीको घटना कम हुने वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख डिएसपी नविन कार्की बताउँछन् । ‘यति वेला चोरले पैसा, सुन र इलोट्रोनिक समानमा बढि ध्यान दिएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘यी सामान सजिलै बोक्न सकिने हँुदा यसमा चोरको आकर्षण बढेको हो ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा भने अली फरक रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘सहरको तुलनामा गाउँमा धेरै चोरी हुने समय फरक छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा मान्छेहरु छिटै सुत्छन्, त्यही भएर ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म धेरै चोरी भएको पाइन्छ ।’
चोरीको घटना कम गराउन स्थानीयकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए । ‘आफूले घर छोडर जाने वेलामा कि नजिकैको प्रहरीकहाँ खबर गर्नुप¥यो होइन भने छिमेकीलाई भन्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘त्यति मात्र गर्न सकियो भने चोरीको घटनामा धेरै नियन्त्रण आउँछ ।’
विशेषगरी गरि इलोक्ट्रोनिक समानहरुमा सुरक्षा अपनाउन सकिने उनले बताए । ‘मोबाइल र ल्यापटपमा सुरक्षाको लागि एप राख्न सकिन्छ, जसले गर्दा समान चोरी भएपछि पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानो कुरामा ध्यान पु¥याउने हो भने ठूलो क्षती हुनबाट रोकिन्छ ।’
त्यसैगरी घर भाडामा दिँदा ख्याल गर्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘को मान्छे घर भाडामा बसेको छ, उसको सबै जानकारी राख्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै त्यस्तो शंका लागेमा तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ ।’
चोरीको तथ्यांक बढ्दो
गएको ३ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कास्कीमा चोरीका घटनाको तथ्यांक बढ्दो छ ।
आव ०७२/७३मा ३० वटा चोरीका घटना भएका थिए । उक्त संख्या बढेर ४९ पुग्यो आव ०७३ /७४मा । चोरीका घटना ०७४/०७५मा बढेर ६२ पुगेको देखिन्छ । अहिलेको आर्थिक वर्ष चलिरहँदा १२ वटा चोरीका घटना भइसकेका छन् ।
मुलुकी अपराध ऐन २०७४ अनुसार चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र बिस हजार रुपैयाँदेखि सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।